Jurassic fauna: dinosaurs, vertebrates na invertebrates | Netwọk Mgbasa Ozi
Dị ka anyị maara n'ime oge nke Mesozoic Enwere oge 3 gosipụtara akara dị iche na mmepe nke flora na fauna na ihu igwe na geology. Oge 3 ahụ bụ: Triassic, Jurassic y Ugbala. Taa, anyị ga-elekwasị anya n'ịmụ ihe Anụ Jurassic. Nke a bụ oge mgbe dinosaurs niile gbasara gbasara ọtụtụ ebe okpomọkụ nke ụwa.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mmepe nke faịn Jurassic.
2 Mmepe nke Jurassic fauna
3 Jurassic fauna nke ikuku na nke ala
Ọ bụrụ na oge Jurassic gosipụtara otu ihe, ọ bụ na nnukwu mmepe ndụ gbasiri ike n'ụzọ sara mbara ma n'ogologo osisi na anụmanụ. Ma obu na n'ime nde iri ise na isii nke oge a di, osisi nile puru imeputa oke ohia na oke ohia nke otutu anumanu baputara.
N'ime anụmanụ ndị a na-eme anụmanụ, anyị na-ahụ dinosaurs. Anumanu ndi gbasiri ike na mbara ala nile bu ma ndi nke uwa ma nke mmiri. Anyi aghaghi ichefu na n'oge a na onodu ihe banyere ala, enwere oru kporo nke efere tectonic.
Dinosaurs bụ anụmanụ kachasị mara amara n'ihi eziokwu ahụ bụ na a mụọla ha n'ụzọ miri emi na okike ndị enwetaghachiri. Ndụ anụmanụ n'oge a nwere ike imeri ebe obibi niile nke ụwa, nke mmiri na nke ikuku.
Mmepe nke Jurassic fauna
N'ime otu invertebrates anyị nwere ike ịhụ na ebu ebuola oke. N'ime molluscs, ọ bụ gastropods, bivalves na cephalopods kachasị gbasaa ma gbasasịa. N'ihi mkpochapu nke mebiri n'oge ngwụcha Triassic ụfọdụ klas dị ka Ammonoids, Nautiloids (ha ka dị taa) na Belemnoideos.
Otu ọzọ nke invertebrates nke nwetakwara nnukwu mgbanwe n'oge Jurassic bụ echinoderms. N'ime echinoderms ahụ, ndị nọ na klas nke asteroids bụ ndị gbasaa kachasị. N'ime klaasị a, anyị nwere azụ azụ. Echinoids biri otutu ebe obibi mmiri. N'ime otu a nwere urchins nke oké osimiri.
N'ime oge nile arthropods bara ụba. Karịsịa ndị niile so na klas nke crustaceans ka etolitere na gburugburu mmiri, nke anyị nwere crabs. Na mgbakwunye, enwere ụfọdụ ụdị ahụhụ dị ka butterflies, wasps na grasshoppers.
Dị ka a ga-atụ anya ya n'ime akwụkwọ akụkọ, ndị na-achịkwa oge a kpamkpam bụ ihe ndị na-akpụ akpụ. Ma ọ bụ nke anụmanụ nke Jurassic otu ìgwè anụmanụ kachasị karịa bụ dinosaurs. Ndị Amphiia malitekwara ịpụta iche mana ka ọ dị obere. Ọ bụ ezie na ndị nnọchianya ole na ole nke otu mammals dị ole na ole, ha malitere ịmalite n'oge a.
N'ime ebe obibi mmiri, anyị na-ahụ usoro ndụ na ndụ jupụtara na ya. Otutu ndu nke di n’oge ahu ka emeputara na gburugburu mmiri. E nwere ụdị azụ dị iche iche, ọ bụ ezie na mmiri na-akpụ akpụ bụ ndị eze mmiri. Ndị nnọchiteanya kachasị bụ ndị a:
Ichthyosaurs: ụdị osimiri a na-akpụ akpụ gbasasịrị n'oké osimiri niile nke ụwa. Nri ya zuru oke ma wakpo nnukwu anụ. Ha nwere ike iru mita 18 n'ogologo ma nwee ọtụtụ nku, ọdụ na azụ. Ihe omuma ya bu ihe anyi choputara na aru ogologo na ogologo nke nyere aka ka anyi jide nri. O nwere ezigbo mmepe gburugburu iji nwee ike ịkwa ezigbo anya mmiri. Dika ihe eji acho achoputara nke ichthyosaurs, anyi ghota na ha bu anumanu di ndu. Ya bụ, ẹmbrayo na - eto n’afọ nne ya.
Plesiosaurs: anụmanụ ndị a gbara mmiri buru ibu karịa ichthyosaurs. Ha ruru ihe ruru 23 mita n'ogologo. Olu ya nwere ọdịdị ogologo ogologo. Ha nwere aka na 4 nke na - agagharị ngwa ngwa n'okpuru mmiri ma dị ka nku. Ahụ ya sara mbara nke ukwuu.
Jurassic fauna nke ikuku na nke ala
Ka anyị ghara ichefu na obere nnụnnụ pụtakwara n'oge oge Jurassic, n'agbanyeghị na anụ na-akpụ akpụ bụ ndị nwe nke ikuku. Ndị a bụ Pterosaurs. Mụ anụmanụ ndị a nwere nha dịgasị iche dabere na ụdị a, anyị nwere ike ịchọta site na obere ruo ụfọdụ nke nnukwu. Isi ya kpuchiri ntutu ya na nku ya sara mbara nke mebere akpụkpọ ahụ nke na-ekekọta mmadụ na mkpịsị aka aka n'ụzọ yiri ụsụ.
N'ihi ọtụtụ ihe mgbe ochie anyị hụrụ na Pterosaurs anyi nwere ike ima na ha buru ibu. Ọ ga-ekwe omume ịkọwapụta na ha nwere ezi echiche iji nwee ike weghara anụ oriri site na elu. Nke a bụ n'ihi na nri ha na-eri anụ zuru oke ma ha nwekwara ike na-azụ azụ na ụmụ ahụhụ ụfọdụ. Iji jide azụ dị na mmiri, ha chọrọ nlele dị mma.
Dị ka vertebrates nke terrestrial obibi anyị nwere tumadi ndị nnukwu dinosaurs. Dinosaurs nwere ụdị abụọ: anụ na-eri anụ na ahịhịa. N'ime herbivores, apatosaurus, brachiosaurus, gigantspinosaurus na igwefoto bụ ndị kachasị, tinyere ndị ọzọ. Anyị ga-akọwa ha nkenke:
Apatosaurus: Ọ nwere ike ịdị arọ ruo tọn 30 ma buru ibu (mita 21).
Brachiosaurus: O jere ije n'ụkwụ 4 ma mara ya nke ukwuu na ogologo olu ya. Ọ dị mita iri na atọ n’ogologo na ama iri abụọ na atọ.
Camarasaurus: ọ nwere ike iru mita 18 n'ogologo. O nwere akwukwo ogwu nke nwere udiri ikuku nke na enyere aka belata aru ya.
Gigantspinosaurus: ejikere mbadamba ọkpụkpụ agha kpamkpam. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu, ọ nwere nnukwu nchekwa. O nwere ike itule mita ise n’ogologo.
N'etiti dinosaurs ndị na-eri anụ anyị nwere ihe ndị a:
Allosaurus: na nsọtụ ha ka ha mepụtara nke ukwu iji nwee ike ijide anụ oriri ha. Ha nwere ike iru mita iri na abụọ n’ogologo.
CompsognathusN’agbanyeghi na obu anu anumanu, o pere mpe pere mpe. O ruru otu mita n'ogologo.
Cryolophosaurus: ọ dị naanị mita isii n’ogologo na mita atọ n’ịdị elu. Site na aka ya abua, o nwere nku-ume siri ike nke nwere ike ibibi anụ oriri ya.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ nke Jurassic.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Anụmanụ Jurassic
Tondị atomic nke Dalton